‘पिसिआर रिएजेन्ट’को मौज्दात रित्तियो, दुई हजार शंकास्पद संक्रमितको परीक्षण अन्योलमा – Health Post Nepal
दीपक दाहाल र खिलानाथ ढकाल/काठमाडौं
२०७७ वैशाख २३ गते २०:३१
स्वास्थ्यकर्मीलाई हाहाकार पिपिई लगाउँदै फेसबुकमा फोटो हाल्दै कर्मचारी र जनप्रतिनिधि
विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को परीक्षण गर्ने महत्वपूर्ण रिएजेन्टको चरम अभाव भएको छ। संक्रमण दर र परीक्षणको आवश्यकता बढ्दै जाँदा रिएजेन्ट अभाव चुलिएको हो।
पछिल्लो एक सातादेखि नै आवश्यक पर्ने विभिन्न प्रकारका रिएजन्टहरू सकिएका कारण परीक्षणको संख्या उल्लेख्य रुपमा घटेको छ।
पछिल्लो समय स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि नेपाली सेनाले जिटुजी प्रक्रिया र स्वास्थ्य सेवा विभागले कोटेसनमार्फत् सुरू गरेको दुबै खरिद प्रक्रियाबाट सामान आइनपुग्दा संक्रमण थाहा पाउने प्रमुख विधि परीक्षण नै प्रभावित बनेको हो।
अहिले नेपालमा रियलटाइम पिसिआर र र्‍यापिड डाइग्नोस्टिक टेष्ट (आरडिटी) दुई विधिबाट परीक्षण गरिँदै आएको छ। आरडिटीको विश्वसनीयतामा सन्देह पैदा भएको र पछिल्ला समय गरिनुपर्ने अधिकांश परीक्षण पिसिआर विधिबाट गर्नुपर्ने भएकोले रिएजेन्टबिना यो सम्भव छैन। स्रोतका अनुसार अहिले सबैभन्दा बढी नमूनाबाट आरएनए निकाल्ने भिटिएमको चरम अभाव छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार स्वास्थ्य सेवा विभागले खरिद गरेको रिएजेन्ट नेपाल आउन कम्तीमा पनि पाँच दिन लाग्ने अवस्था छ। सरकारले आपतकालीन व्यवस्थापनका लागि विभिन्न उडान आउन लागेका देशबाट रिएजेन्ट झिकाउने प्रयास जारी राखे पनि सफल भएको छैन।
सेनाले बुधबारदेखि सामग्री ल्याउन थालिने बतायो। ‘ग्वान्झाओको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भन्सार क्लियर जति छिटो हुन्छ, त्यति छिटो सामान आउँछ,’ पाण्डेले भने, ‘यी सबै प्रक्रिया त्यहाँका कर्मचारीले गर्ने हुन्, हामीले सबै काम गर्दागर्दै पनि केही ढिलो भइरहेको भने हो।’
कोरोना संक्रमणको पछिल्लो ‘हटस्पट’ बनेको नेपालगञ्जमा मात्रै संक्रमितसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आएका तीन सय र उनीहरूसँग सम्पर्क रहेकासमेत आधारमा झन्डै एक हजार पाँच सयको परीक्षण गर्नु जरुरी छ। तीबाहेक अन्य संक्रमितका प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष सम्पर्कमा आएका झन्डै पाँच सयको पनि तत्काल परीक्षण गर्नुपर्नेछ।
विश्वव्यापी मान्यताअनुसार शंकास्पद मानिसमा जछि छिट्टै भाइरसको अवस्था पत्ता लगाउन सक्यो उति नै संक्रमणको दर अर्थात् रोग फैलिने गति रोक्न सकिन्छ। समुदायमा संक्रमण देखिएको उदयपुरसहित कपिलवस्तु, सप्तरी, रौतहटलगायतका ठाउँमा संक्रमितका सम्पर्कमा आएकाहरूको ठूलो संख्यामा परीक्षण गर्नुपर्नेछ।
एक हजार पाँच सय परीक्षण गर्नुपर्ने नेपालगञ्जमा मंगलबार बिहानसम्म २५० जनाको परीक्षण गर्न पुग्ने मात्रै सामग्री छ। ‘यो फारु गरेर परीक्षण गर्ने र सामग्री जोगाउने बेला होइन, केन्द्रसँग पनि परीक्षण सामग्री छैन रे, अब के गर्ने हो?,’ भेरी अञ्चल अस्पतालका एक चिकित्सकले भने।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)का अनुसार यसरी ठूलो संख्यामा संक्रमण देखिएको अवस्थामा संक्रमितको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आएकाहरूमा २४ घण्टाभित्रै परीक्षण गरिसक्नुपर्छ। यो आधारमा नेपालगञ्जको ‘हटस्पट’को परीक्षण सकिन कम्तीमा साता लाग्छ।
पछिल्लो एक सातामै परीक्षण रिएजेन्ट कमी भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले देशभर परीक्षणको संख्या घट्दै गएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा दुबै विधिबाट गरी एक हजार पाँच सय ६२ नमूना परीक्षण भएको छ। जसमध्ये पिसिआर विधिबाट दुई सय १० वटा नमूना मात्रै परीक्षण भएको छ।
वैशाख १७ गते कूल सात सय २२ जनाको पिसिआर विधिबाट परीक्षण भएकोमा मंगलबारसम्म आइपुग्दा झन्डै दैनिक परीक्षण क्षमता पाँच सय घटेको छ। त्यसमा पनि पछिल्ला केही दिनयता नेपालगञ्जको समुदायमा संक्रमण देखिएसँगै झन् परीक्षण बढ्नुपर्ने समयमा घट्नुले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणको काम नै प्रभावित पार्ने विज्ञहरूले बताएका छन्।
(हेर्नुस् ग्राफमा एकसाताको परीक्षण अवस्था)
देशभरका तुलनामा एकै दिनमा झन्डै एक हजार नमूना परीक्षणको क्षमता रहेको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पनि परीक्षण सामग्री सकिएको छ। प्रयोगशाला उच्च स्रोतका अनुसार मंगलबार दिउँसोसम्म मुस्किलले ६० वटा नमूना परीक्षण गरिएको छ। ‘केही नमूना परीक्षण गर्नसक्ने सामग्री त आपतकालीन मैजाद पनि राख्नुपर्छ,’ प्रयोगशालाका ती अधिकारीले भने, ‘आपदकालीन व्यवस्थापनका लागि टेकु अस्पतालमा एचआइभी परीक्षणमा प्रयोग गर्ने मेसिन र सामग्री विकल्पको रुपमा तयार गरिराखेका छौं।’
स्वास्थ्य सेवा विभाग आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाका निर्देशक भोगेन्द्र डोटेलका अनुसार अन्य स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि सम्झौता भएका तीन कम्पनीबाहेक छुट्टै कम्पनीसँग रिएजेन्ट सम्झौता भएको छ। ‘कम्पनीले मे १० भित्र ल्याउँछु भनेको छ,’ उनले भने, ‘तत्कालका लागि कोरियालगायतका ठाउँबाट पनि आपतकालीन जोगाडको प्रयास भइरहेको छ।’
डोटेलले खरिद नियमावलीको जटिल प्रक्रिया, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रहेको सामग्रीको अभाव र उडान नहुनुले सामग्री जुटाउन कठिनाइ भइरहेको बताए।
नेपालगञ्जबाहेक विराटनगर र धरानका प्रयोगशालामा केही नमूना परीक्षण गर्न पुग्ने सामग्री भए पनि चितवन, वीरगञ्ज, सुदूरपश्चिमलगायतका प्रयोगशालाहरूमा पनि परीक्षण सामग्री सकिएको छ। उदयपुर र झापामा संक्रमित क्षेत्रको नमूना परीक्षण गरिरहेको कोसी अञ्चल अस्पतालले अहिले काम नरोकिएको तर पर्याप्त मात्रामा सामग्री नरहेको बताएको छ। ‘अहिले तत्कालका लागि परीक्षण गर्न समस्या छैन, तर हामीले मगाइरहेका भने छौं,’ एक चिकित्सकले भने।
विराटनगरको कोरोना अस्पतालमा उदयपुर र झापाका ३१ संक्रमितको उपचार भइरहेको छ। पछिल्लो परीक्षणमा रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि ६ जना स्वास्थ्यलाभपछि बुधबार बिहान घर फर्किँदैछन्।
सेना भन्छ– केही दिन लाग्छ
नेपाली सेनाले चीनमा पाँच दिन बिदा भएका कारण मेडिकल सामग्री ल्याउन ढिलो भएको जनाएको छ।
वैशाख १९ गते नै खरिदको सबै प्रक्रिया टुंगिए पनि चीनमा मे १ देखि पाँच दिन सरकारी बिदा रहेका कारण सामान ल्याउन नसकिएको सैनिक जनसम्पर्क तथा निर्देशनालयले जनाएको छ। ‘चीनमा बिदा छ, कर्मचारी कार्यालयमा नआउने भएकाले सामग्री उठाउन नसकिएको हो,’ प्रवक्ता सहायक रथी विज्ञानदेव पाण्डेले भने।
चीनमा अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवस पाँच दिनसम्म मनाउने चलन छ। सो बिदा मंगलबार सकिन्छ। सेनाले बुधबारदेखि सामग्री ल्याउन थालिने बतायो। ‘ग्वान्झाओको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भन्सार क्लियर जति छिटो हुन्छ, त्यति छिटो सामान आउँछ,’ पाण्डेले भने, ‘यी सबै प्रक्रिया त्यहाँका कर्मचारीले गर्ने हुन्, हामीले सबै काम गर्दागर्दै पनि केही ढिलो भइरहेको भने हो।’
जिटुजीबाट खरिद गर्ने जिम्मेवारी पाएको नेपाली सेनाले चीनको सिनोफर्मा कम्पनीसँग ३४२ टन मेडिकल सामग्री ल्याउने सम्झौता गरेको छ। तत्काल चाहिने सामग्रीहरू विमान चार्टर्ड गरेर ल्याउने सेनाको योजना छ। चीनको कम्पनीबाट खरिद गरिएको सामग्री ल्याउने जिम्मा ललितपुरको फ्ल्यास फ्रेट कम्पनीलाई दिइएको छ।
परीक्षणका लागि के चाहिन्छ?
पिसिआर परीक्षणका लागि नाक र घाँटीबाट स्वाब निकालेर भाइरल ट्रन्सपोर्ट मिडिया (भिटिएम)मा राखेर आइस-जेल प्याकमा राख्नुपर्छ। त्यसलाई हावा नछिर्ने गरी बलियोसँग बन्द गरेर प्रयोगशालामा पठाइन्छ। प्रयोगशालामा संकलित नमूनाको आरएनए निकाल्ने एक्ट्रयाक्सन कीट चाहिन्छ।
आरएनए निकालेपछि त्यसलाई डिएनएमा परिवर्तन गर्न रिभर्स ट्रान्सक्रिपटेज इन्जाइम (रिएजेन्ट) चाहिन्छ। सो डिएनएमा अर्को रिएजेन्ट प्राइमर र प्रोबको प्रयोग गरेर पिसिआरको जाँच गरिन्छ। र, यसरी कोरोना पोजेटिभ वा नेगेटिभ पत्ता लगाइन्छ।
अहिले नेपालमा पिसिआरका लागि ओपन र क्लोजगरी दुई प्रकारका पिसिआर मेसिनहरू छन्। सुरूमा ओम्नी समूहले ल्याएका पाँच वटा र पछि विराटनगर र जनकपुर पठाइएका मेसिनहरू क्लोज सिस्टमका हुन्। जसमा त्यही कम्पनीका रिएजेन्ट चाहिन्छ र थोरै नमूना मात्रै परीक्षण गर्न सकिन्छ।
केन्द्रीय प्रयोगशाला, सेती प्रादेशिक अस्पताल, पोखरा, धरानलगायतका ठाउँमा ओपन सिस्टमका पिसिआर मेसिन ओपन सिस्टममा जाँच गरिन्छ। केही दिनअघि भिटिएम अभाव भएरकोमा अहिले आरएनए एक्ट्रयाक्सन कीटको बढी अभाव भएको छ।
Tags: खिलानाथ ढकाल, दीपक दाहाल